Hamba phambili kunye ne "Party" Emva kokufunda ukudibanisa "Vala"
Uya kuba nesizathu "kwiqela" emva kokufunda le ngqikelela
Isenzi isantya nje sisinye igama elithi "ukubhiyozela," "ukuya kwidlangala," okanye "ukutya" ngesiFrentshi. Enye inketho i- célébrer kwaye ngelixa kunokuba lula ukukhumbula, ukukhawuleza kulula ukudibanisa, ngoko unokhetho olululo malunga nokusetyenziswa. Ukuba uthanda ukudibanisa okulula, makhe sijonge indlela eyenziwe ngayo ngokukhawuleza .
Ukudibanisa iVerb verb Fêter
I-Fêter ilandela isenzo somntu oqhelekileyo .
Ukuba usebenze kunye nezinye iilwimi -Izenzi , ke le sifundo kufuneka ibe yinto ecacileyo. Nangona le nto isenzo sakho sokuqala salolu hlobo, ungathatha oko ufundayo apha kwaye uyisebenzise kumazwi afana nokunika (ukunika) , ukuvala (ukuvala) kunye nabanye abaninzi.
Ngaphambi kwesiphi na isenzo sokudibanisa, kufuneka sichaze isenzi sesenzi. Ukuzonwabisa , le fest -. Kungoku kwesi sihloko sokuba sidibanisa iindidi ezingafaniyo zokuphela. Umngeni wesiFrentshi kukuba kukho ukuphela kwesigama ngasinye kwisigama ngasinye kwisithuba ngasinye, esizayo, nangaphelelanga. Oko kuthetha ukuba unamazwi amaninzi okufundwayo, kodwa uya kufumana i-hang it.
Ngokomzekelo, ukuze uthi "Ndiyibhiyozela," sebenzisa " ndiyintanda " okanye athi "siya kudlala ," sebenzisa " us fêterons ." Ukusebenzisa oku kumxholo kwenza kube lula ukukhumbula.
mkhosi fêterai fêtais
fêtes fêteras fêtais
mkhosi fêtera fêtait
fêtons fterterons fêtions
fêtez fêterez fêtiez
zixhamle fêteront fêtait
Ukuthatha Inxaxheba Kokubakho kweNkundla
Ukusebenzisa i- participant yangoku yokubamba njengezenzi, isichazi, isibizo, okanye i-gerund, yongeza intsimbi yesenzi. Oku kubangela ukuba uthathe inxaxheba kwi- fêtant .
I-Past participle ne-Passé Composé
Iqela elidlulileyo lokuthatha i - fêter yi-fêté. Oku kusetyenziswa ukudala ixesha elidlulileyo elibizwa ngokuba yi- compé compé .
Uya kufuneka kwakhona ukuba udibanise isenzi esincedisayo ukuba uvumelane nesigama sesigxina. Ngokomzekelo, "ndikhethile" ngu " je fêtê " kwaye " sithandwe " ngu " sisi fêtê ."
Okulula ngakumbi Ukudibanisa ukuCamngca ukuFunda
Xa isenzo sokubhiyozela siqinisekisiwe, uya kufumana ukusetyenziswa kwesigqibo sokuzithoba kwesenzi . Ngendlela efanayo, isiqhelo sesenzi somqathango sichaza ukuba ukubhiyozela kuxhomekeke kwenye into.
I-passé elula ihlala igcinwe ukubhalwa ngokusemthethweni. Ngelixa ungayisebenzisi rhoqo, ukwazi ukuba bobabini kunye nefomu yokungathobeliyo kuya kuphucula izakhono zokufunda zaseFransi.
je mkhosi fêterais fêtai fêtasse
kuphela fêtes fêterais fêta fêtasses
il mkhosi fêterait fêta fêtât
nathi fêtions fêterions fêtâmes fêtassions
nawe fêtiez fêteriez fêtâtes fêtassiez
ba zixhamle fterteraient nxu lumene i-fantassent
Ifom yokubaluleka isebalulekileyo ngokukhethekileyo ukunyusa ngenxa yokuba isoloko isetyenziswe kwizivakalisi kunye neengxelo ezimfutshane. Xa uyisebenzisa, zikhululeke ukuyeka ukusetyenzeka kwaye uphuphe isigama sesigxina: "u- fête " uyaba " mkhosi ."
Ukubambisana kwetenzi lwesiTaliyane: Isikhokelo
Ukusebenzisa i- 'Bueno' njenge-Interjection efanelekileyo eSpanish
Ixesha elizayo kwiItaliyane
Indlela yokusebenzisa iItaly Reflexive Pronouns
Indlela yokudibanisa isenzi "Imparare" ngesiTaliyane
Indlela yokudibanisa "Ummemezeli" (ukuvakalisa)
Uguqulelo lwesiFrentshi lwe-Intanethi: Ngaba Ungabathemba?
Abasetyhini kunye neMfazwe Yehlabathi II: Iinkampu zoLondolozo
Ngaba Uncle Sam Ungumntu Wenene?
'Oomkhulu kaOckhor' Chords
30 Izihloko ezibhaliweyo: I-Persuasion
I-Touch of Royalty: Iimifanekiso ze-10 ze-Animated Princess
Yintoni iConbon Monoxide Poisoning?
Iimviwo zeeMathematika - Ukuxelela ixesha kwixesha lekota
Iintlanzi ezilishumi eziphezulu kakhulu
Ngaba amaKatolika angadla inyama ngeLwesihlanu elungileyo?
Ngaba Ndiya Esihogweni Ukuba Ndiza Kulahla?
Kuphi ukukhuphela iCattoon Theme Songs kunye neNzandi
Abaculi be-Black Gospel abaphezulu